On1.click | ဝါယောင်းငှက်ဗိုက်ဝါ
... ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၊ ပတ်ကွိုင်တောင်တန်းတွင် တွေ့ရှိရလေ့ရှိသည်။ ၂၀၂၀ ခ...
Illustration by John Gould and William Matthew Hart. The crown and nape should actually be light grey.
ဝါယောင်းငှက်ဗိုက်ဝါ (Pterorhinus galbanus) သည် စာကလေးမျိုးနွယ်ဝင်ငှက်ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၊ ပတ်ကွိုင်တောင်တန်းတွင် တွေ့ရှိရလေ့ရှိသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် မတ်လ ၄ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာနမှ ယင်းငှက်ကို မျိုးဆက်ပျက်သုဉ်းမည့်အန္တရာယ်ရှိသဖြင့် ကာကွယ်ထားသည့် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များအဖြစ် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
↑ BirdLife International (2013). "Garrulax galbanus". IUCN Red List of Threatened Species 2013. IUCN. old-form url